Factory System Valves rano, mpamatsy - mpanamboatra valizy rano China
1318 Valizy mampihena ny tsindry
Famaritana Fampihenana valizy: mampihena ny tsindry fidirana avo kokoa mankany amin'ny tsindry faran'ny ambany. Fanerena fivoahana tsy tapaka eo ambonin'ny elanelam-be. Valizy lehibe ampiasain'ny mpanamory fiaramanidina tsy iharan'ny tsindry. Ny tsindry fivoahana dia azo ovaina amin'ny visy singe. Azo tazonina tsy misy fanesorana amin'ny tsipika fantsona. Haingam-pandeha fanokafana / valiny azo ovaina. Fitsipika marin-toerana amin'ny fikorianan'ny zero. Ny flanged sy ny fandavahana dia mifanaraka amin'ny EN1092-2 PN10 / 16; ANSIB16.1 Kilasy125. Groove end dia mifanaraka amin'ny AWWA ...
2108 AWWA C504 C516 Valin'ny lolo hoentina roa
Ny fotodrafitrasa misy fitaovana tsara sy ny fitantanana kalitao miavaka miavaka amin'ny dingana rehetra amin'ny taona dia ahafahanay manome antoka ny fahafaham-pon'ireo mpividy ho an'ny 2108 AWWA C504 C516 Double Eccentric Butterfly Valve, ny vokatra rehetra dia miaraka amina serivisy tsara kalitao sy tonga lafatra aorian'ny fivarotana. Miorina amin'ny tsena sy mifantoka amin'ny mpanjifa no efa narahinay. Manantena fatratra ny fiaraha-miasa Win-Win! Ny toerana misy fitaovana tsara sy fitantanana kalitao miavaka miavaka amin'ny dingana rehetra amin'ny g ...
GD1 GD2 BS5163 AWWA C515 NRS Valizy azo antoka mipetraka amin'ny vavahady misy extension Spindle
Famaritana GD1: 150≤H1≤1000, GD2: H1≥1000. Ny elanelana amin'ny tsipika afovoan'ny valizy mankany amin'ny tany dia omen'ny mpanjifa. Rehefa manome ny angon-drakitra, azafady azonao antoka fa ny lesoka dia tsy tokony hihoatra ny ± 20mm. Fitaovana T-wrench: valizy 10 mitovy valizy vavahady mitovy habe no miaraka amina T-wrench iray. Mila mividy ity wrench ity ny mpanjifa raha mila bebe kokoa. Ity valizy vavahady mivantana nalevina ity dia miaraka amin'ny valizy vavahady azo antoka BS 5163 mipetraka na FM / UL NRS mipetraka tsara ...
9709 Valizy fanamoriana fiaramanidina Double Orifice
Ny famaritana dia manome ny asan'ny Air Release sy Air / Vacuum Valves. Mandany rivotra be dia be amin'ny fanombohana ny rafitra. Manome fiarovana amin'ny fianjeran'ny fantsona noho ny banga. Arotsaho ireo rivotra kely voangona mandritra ny fiasan'ny rafitra mahazatra. NPT na kofehy Metric an'ny fidirana. Ny faneriterena miasa sy ny maripana 16bar dia nomena -10 ° C hatramin'ny 120 ° C. Fiarovana amin'ny harafesina Fusion mifamatotra mifamatotra na epoxy ranoka nolokoina anatiny sy ivelany. Famaritana ara-pitaovana Bo ...
9708 Valizy fanamoriana an'habakabaka Orifice
Ny famaritana dia manome ny asan'ny Air Release sy Air / Vacuum Valves. Mandany rivotra be dia be amin'ny fanombohana ny rafitra. Manome fiarovana amin'ny fianjeran'ny fantsona noho ny banga. Mampiditra ny endri-javatra roa ao anaty zanak'omby iray, mifintina kokoa sy ara-toekarena kokoa. NPT na kofehy Metric an'ny fidirana. Ny faneriterena miasa sy ny maripana 16bar dia nomena -10 ° C hatramin'ny 120 ° C. Fiarovana amin'ny harafesina Fusion mifamatotra mifatotra na epoxy ranon-doko nolokoina anatiny sy exteri ...
9701 Valve mandeha ho azy
Famaritana Orifice kely an'ny 1/16 in. (1.6mm) hamoahana ny rivotra ambany tsindry mandritra ny fiasan'ny fantsona mahazatra. Ny float dia mifamatotra amin'ny vent amin'ny alàlan'ny mekanika fampifandraisana izay afaka miasa ny vent amin'ny tsindry fantsona feno. NPT na kofehy Metric an'ny fidirana. Nankatoavina ny WRAS. Ny faneriterena miasa sy ny maripana 16bar dia nomena -10 ° C hatramin'ny 120 ° C. Fiarovana amin'ny harafesina Fusion mifamatotra mifamatotra na epoxy ranoka nolokoina anatiny sy ivelany. ...
9208 Valve mandeha ho azy
Famaritana Ny valiny 9208 dia valizy rivotra mandeha ho azy avo lenta. Ny seza mahazaka dia manome tombo-kase azo antoka 100%. Ny famolavolana efitrano tokana dia manome fahombiazana tsara kokoa noho ny famolavolana efitrano roa. Ny haingam-pandeha sy ny haingam-pandeha dia mety hahatratra ny hafainganam-pandehan'ny feo. Tsotra ny famolavolana azy amin'ny vy tsy mahazaka harafesina. Peratra famehezana EPDM. Ny flanged sy ny fandavahana dia mifanaraka amin'ny EN 1092-2 PN16 (Misy karazana hafa azo atao amin'ny fangatahana). Outlet vehivavy kofehy acc. To DIN ISO 228. ...
9110 Valve rivotra mitambatra ho an'ny loto
Famaritana Famaritana tokana indroa na efitrano misy rivotra telo sy valizy famotsorana mandeha ho azy. Natao hiasa miaraka amin'ny ranon-javatra mitondra sombin-javatra matevina toy ny tatatra sy effluent. Afaho ny rivotra mandritra ny famenoana ny rafitra sy ny rivotra ialana mandritra ny fanalefahana ny rafitra. Ny fisarahana tanteraka ny tsiranoka amin'ny mekanika famehezana dia manome fepetra asa tsara indrindra. Ny faritra metaly anatiny rehetra vita amin'ny vy vy. Ny flanged sy ny fandavahana dia mifanaraka amin'ny EN1092-2 PN16 (Karazana hafa ...
9101A Valve fanamoriana fiaramanidina Double Orifice
Ny famaritana ny famoahana ny rivotra roa dia mamoaka ny habetsahan'ny rivotra voahangona mandritra ny fiasan'ny rafitra mahazatra. Avelao ny fidiran'ny rivotra be mandritra ny fivoahan'ny fantsona. Avelao ny famoahana rivotra be dia be mandritra ny famenoana ny fantsona. Omeo fiarovana amin'ny firodanan'ny fantsona noho ny banga. Ny flange sy ny fandavahana dia mifanaraka amin'ny EN 1092-2 PN16 (Misy karazana hafa azo atao amin'ny fangatahana). Ny fanerena miasa sy ny mari-pana 16bar dia nomena -10 ° C hatramin'ny 120 ° CC ..
9100 Valizy fanamoriana an'habakabaka Orifice
Ny famaritana dia manome ny asan'ny Air Release sy ny valin'ny rivotra I I. Mandany rivotra be dia be amin'ny fanombohana ny rafitra. Manome fiarovana amin'ny fianjeran'ny fantsona noho ny banga. Mampiditra ny lafin-javatra roa ao anatin'ny valizy iray, mifatotra kokoa sy ara-toekarena. Flange sy fandavahana mankany EN1092-2 PN10 / 16; ANSI B16.1 Kilasy125. Ny faneriterena miasa sy ny maripana 16bar dia nomena -10 ° C hatramin'ny 120 ° C. Fiarovana amin'ny harafesina Fusion mifamatotra mifamatotra na ranoka ep ...
6125 DIN3356 Valve Globe
Ny valizy manokana dia mifanaraka amin'ny DIN3356. Seza vy. Tombo-kase azo ovaina. Fonosana azo soloina amin'ny tsindry. Azo alaina miaraka amin'ny flanges EN1092-2 2 PN10 na PN16, ANSI B16.1 Kilasy 125. (Karazana hafa azo atao amin'ny fangatahana) Halava mifanatrika mifanaraka amin'ny andiany DIN3202 F1. Ny faneriterena miasa sy ny maripana 16bar dia nomena -10 ° C hatramin'ny 120 ° C. Fiarovana amin'ny harafesina epoxy misy loko anatiny sy ivelany .. Fitaovana ara-pitaovana Vatosika vy volondavenona Bonnet volontsôkôlà mandoko ...
6123 EN13789, Valin'ny Globe MSS SP-85
Ny valin'ny famaritana dia mifanaraka amin'ny EN13789, MSS SP-85. Seza vy. Tombo-kase azo ovaina. Fonosana azo soloina amin'ny tsindry. Azo alaina miaraka amin'ny flanges EN1092-2 PN10 na PN16, ANSI B16.1 Kilasy 125. (Karazana hafa azo atao amin'ny fangatahana) Halava mifanatrika mifanaraka amin'ny EN558-1 andiany 10 sy ASME B16.10. Safidy 150 psi misy. Famaritana ara-pitaovana Vatana volondavenona vy Bonnet volontsôkôlà kofehy vy Karakarao varahina Disc varahina Voninkazo vy